Umkhiqizi nomhlinzeki we-China Plate Heat Exchanger Qiangzhong
Ishintsha ukushisa i-Plate iyithuluzi elikahle lokushintshaniswa kuketshezi olungamanzi noluketshezi.
Plate ukushisa Ukucaciswa:
Kunezinhlobo ezimbili zokushintshana kwamapuleti okushisa: uhlobo lwe-BR nohlobo lwe-BRB. Ukucaciswa kwezinhlobonhlobo zamapulangwe okushisa okushisa kungokulandelayo:
Ikhodi: BR 0.13 1.0 8 NI Cha: 1 2 3 4 5 6 7
Imibono imi kanje:
Cha. 1 imelela ukushisa kwepuleti
Inombolo 2 yohlobo lwepuleti elimele i-herringbone ripple
No. 3 imele uhlobo lwe-0.13, futhi isho ukuthi indawo eshintshana ngokushisa kweshidi elilodwa ngu-0.13m2
No. 4 imele ingcindezi yokuklama 1 .OMpa
No. 5 imele yonke indawo yokushintshanisa ukushisa eyi-8m2
No. 6 imele uphawu lwenjoloba lwe-NBR
No.7 imele ukwakheka kwesakhiwo sohlaka luhlobo lozimele olweseka kabili (olwaziwa nangokuthi uhlobo lokulenga)
Ishintsha ukushisa kwepuleti iyithuluzi elifanele lokushintshanisa ukushisa okungaqondile nokupholisa ngokusebenzisa uketshezi lokushisa okwehlukene okumbili. Kuboniswa ukusebenza kahle kokushintshanisa ukushisa, izinga lokuthola ukushisa okuphezulu, ukulahleka okuncane kokushisa, indawo encane, umhlangano oguqukayo nokufakwa, ukusebenza okulula, ukufakwa okulula nokuqaqa, impilo yokusebenza isikhathi eside, ukutshalwa kwezimali okuphansi, nokusetshenziswa okuphephile. Ngaphansi kwesimo esifanayo sokulahleka kwengcindezi, i-coefficient yokudlulisa ukushisa kwesishintshisi sokushisa kwepuleti iphindwe izikhathi ezingama-3-5 kunaleso sokushintshisana ngokushisa kweshubhu. Indawo ephansi ingokwesithathu kuphela kohlobo lweshubhu, futhi isilinganiso sokuthola kabusha ukushisa singafinyelela ngaphezu kuka-90%.
Isakhiwo se-exchanger luhlobo lokusekelwa okuphindwe kabili. Izingxenye eziyinhloko zifaka amapuleti, irabha esishintsha ukushisa, ingcindezi engaguquki, ingcindezi ehambayo, izinduku zomhlahlandlela ongaphezulu / ophansi, izinsika, izingqungquthela zesikulufa, izingxenye ezigingqikayo, imibhobho, njll.
Ipuleti lenziwe ngoshidi wensimbi engagqwali ongu-304 noma u-316L, ucindezelwe ezinhlotsheni ezihlukene zikathayela ngemuva kokugunda, futhi ngokuvamile unohlobo lwamabhomu kanye nohlobo lwe-herringbone.
Lezi zingxabano zidlala ngokulandela izindima ezintathu:
● Khulisa indawo efanele yokudlulisa ukushisa.
● Yenza imidiya ibe nesiyaluyalu esiteshini sokugeleza, unciphise ukwakheka kwenhlabathi.
● Ngemuva kokuthi amapuleti esehlanganisiwe, amakhebula wamapuleti ayaxhumana ukuze akhe inani elikhulu lokuxhumana, okuqinisa ukuqina nobulukhuni bamapuleti, okuwavumela ukuthi amelane nomehluko omkhulu wengcindezi phakathi kwalezi zindlela ezimbili zokugeleza.